Chronothermostat: inona izany, ny fomba fiasa sy ny tombony azo amin'ny fampiasana azy | Green Renewable
Rehefa manjaka ny ririnina amin'ny andro ririnina, ny hafanana dia mety mandray ampahany lehibe amin'ny faktioran-jiro ary mampitombo azy. Izany dia rehefa manandrana mitahiry betsaka araka izay tratry ny anananao ianao amin'ny alàlan'ny fitadiavana rafi-pampafana mahomby izay mampihena ny vidiny. Vahaolana mamonjy vola amintsika ary misy tombony sasany noho ny rafitra fanafanana hafa. Momba an'io Chronotherestat.
Raha te hahalala ny tombony rehetra atolotray anao ny momba ny termostat mahazatra sy ny endrika fanafanana hafa dia avereno vakio ity lahatsoratra ity.
1 Inona no atao hoe chronotherestat?
2 Teknolojia Chronotherestat
3 Inona izany?
4 Ny hafanan'ny andro sy ny alina
Inona no atao hoe chronotherestat?
Ny zavatra voalohany dia ny fahalalana izay tiantsika horesahina. Fantatsika rehetra na saika rehetra hoe inona no atao hoe termostat, fa amin'ity tranga ity dia misy tombony bebe kokoa raha ny amin'ny fampiasana azy no resahina. Ny fotoana maharitra mekanisma niomerika izy io ahafahanao mifehy ny angovo avoakanay hanafanana. Afaka mifehy ny haavon'ny hafanana avoaka isika arakaraka ny hatsiaka amin'izany.
Samy miasa amin'ny solika sy ny lasantsy diesel ny chronotherostat. bala, izay manome fahaizana bebe kokoa. Ny tombony lehibe dia ny manampy antsika hifehezana ireo ora ananantsika ary tsy andehanantsika, hanitsy ny mari-pana tiana hahatongavantsika amin'ny fotoana rehetra, noho izany, manatsara fahombiazan'ny angovo ny tranonay. Izany no ahafahantsika mitahiry be amin'ny fanafanana ary afaka manadino zavatra momba ireo faktioran-jiro mahatsiravina sy tsy ampoizina isika amin'ny fotoana maro.
Tsy toy ny termostat iraisana, ity fitaovana manavao ity dia marimarina kokoa sy feno kokoa. Mazava ho azy, ny fahafenoana bebe kokoa dia zavatra sarotra tanterahina kokoa, saingy misy torolàlana kely na a fandaharam-potoana maharitra mora fandaharana azo ianarana tsara. Misy foto-kevitra roa tsy maintsy ianarantsika rehefa mampiasa chronotherestat. Ny voalohany dia ny mari-pana inertial ary ny faharoa ny mari-pana fampiononana.
Ny voalohany dia ny fahalalana ny hafanana faran'izay kely ananan'ny trano mandritra ny andro ririnina nefa tsy manisy fiheverana ny fepetra ivelany. Tokony hojerentsika koa ny karazana insulation ananantsika ao an-trano na raha avelantsika hisokatra ny varavarankely. Ny triatra am-baravarana, varavarankely manaitra sasany dia mety hampihena ny hafanana antsika ary hahatsapa hatsiaka amin'izao andro izao. Alohan'ny hametrahana ny fandaharam-potoana maharitra dia ilaina ny manara-maso tsara ireo lafiny ireo.
Ny hafanan'ny fampiononana dia ilay iray izay tsy maintsy tratran'ny tranontsika hahatsapa ho mahazo aina nefa tsy mafana be. Impiry isika no niditra tao amin'ny toeram-pivarotana ary ny fanamainana dia nahatonga antsika hanala akanjo. Na amin'ny fotoana hafa, tsy mahazo tanana ny fanafanana ao an-trano ary mahazo aina isika amin'ny tanany fohy amin'ny ririnina. Tsy izany no hevitra. Ny ilaina dia ny mahazo aina fa tsy mandany angovo.
Ny mari-pana mety ho an'ny trano dia 21 degre eo ho eo. Amin'ity sanda ity na eo akaikiny dia avo indrindra ny fahombiazan'ny angovo ary farafahakeliny ny fanjifana. Na izany aza, afaka mahazo aina isika nefa tsy mila manala akanjo na mangatsiatsiaka.
Ny tombony omen'ity fitaovana ity antsika dia ny mifehy ny hafanana amin'izay ilaintsika. Izy io dia afaka mizara ara-drariny ny angovo rehetra hahafahana manatratra ny zoron-trano rehetra ary tsy misy mangatsiaka sisa tavela. Noho izany Azontsika atao ny mifehy na miakatra ny mari-pana na milatsaka ary manitsy ny fampiononana lehibe indrindra.
Amin'ny tranga maro dia mahita trano misy hafanana isika amin'ny ankamaroan'ny andro ary maro amin'izy ireo no tsy ao an-trano. Ataon'izy ireo izany ka rehefa tonga any an-trano izy ireo dia afaka mafana rehefa tsy mila miandry ny hafanana hanafana ny trano iray manontolo. Amin'ity fitaovana revolisionera ity dia azontsika atao ny mandrindra ny ora androm-piainantsika izay tadiavintsika hivadika ho tsara rehefa mody isika.
Mba hisorohana an'io karazana toe-javatra misy ny fanafanana io rehefa foana ny trano dia misy ny chronotherostat. Raha mandeha miasa amin'ny 8 maraina, ohatra, isika ary miverina amin'ny 15 dia afaka manamboatra azy io ka, mandeha ho azy dia mihodina amin'ny 14 ora hariva ary mizara ny hafanana rehetra manodidina ny trano. Amin'izany fomba izany dia afaka mafana isika rehefa mody nefa tsy nahavita hafanana nandritra ny 7 ora tsy nisy olona tao an-trano.
Araka ny nolazaiko anao teo aloha, mila manisa ianao ny karazana insulation an-trano ary ny toetr'andro any ivelany. Raha mangatsiaka kokoa, avy ny orana na misy rivotra mahery, dia mora kokoa ho azy ireo ny miditra ao an-trano amin'ny lavaka na satria tsy dia tsara insulation. Amin'ireo tranga ireo dia tsara kokoa ny mamonjy faran'izay betsaka amin'ny hafanana.
Ny hafanan'ny andro sy ny alina
Mba hahazoana antoka fa ny fanjifana no faran'izay kely indrindra azo atao, Manoro hevitra ny manam-pahaizana fa hampihena ny hafanana 15 degre. Amin'ity karazana toe-javatra ity, ny tena atolotra anao dia ny fandaharana ny fandaharam-potoana mba hahafahana mamono ho azy amin'ny fotoana mahazatra antsika ao am-pandriana sy rakotra azy. Miaraka amin'ny bodofotsy sy duvet ary miampy ny fanafanana mavitrika teo aloha tamin'ny ora miasa dia mihoatra ny ampy hitazonana ny mari-pana milamina nefa tsy mila mitazona ny hafanana amin'ny alina.
Raha te handro amin'ny maraina isika ary mangatsiaka be, dia azontsika atao ny mamolavola fandaharam-potoana mba hamelomana antsasak'adiny mialoha na, raha hitany fa ilaina izany, dia tokony hirehitra ho azy isika rehefa milatsaka ambanin'ny tokonam-baravarana ny mari-pana ao an-trano. Azontsika atao ny mametraka izany raha milatsaka 13 degre ny mari-pana dia mandeha ho azy izy io handaminana ny mari-pana hatramin'ny 17 degre ary hihena indray izany.
Ireo tombony azo amin'ny programa rehetra ireo dia afaka manampy antsika hitahiry hatramin'ny 15% amin'ny faktioran-jiro. Ampiarahinay amin'izany ny 10% izay tahirizinay rehefa tapaka irery ilay fitaovana hitehirizana angovo. Ka amin'ny fitambarany, hihena 25% kely kokoa isika amin'ny faktioran-jiro. Ity isan-jato ity dia tsikaritra mandritra ny ririnina.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia ho fantatrareo ny fomba fiasan'ny Chronotherostat sy ny tombony azo avy amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Chronotherestat